China Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss boat Ntụrụndụ egwuregwu ekweisi emepụta na suppliers | Kaiwansi
Fithem ks-020 Bluetooth ikuku ikuku ntị ntị onyeisi ụgbọ mmiri Oge ezumike egwuregwu ekweisi
Akụkụ na-ekokwasị akụkụ nke ihe silicone dị nnọọ nro, batrị abụọ ahụ nwere ike ime ka oge iji ya dịkwuo elu.
Nke a ks-020 nwere bk: 3200 mgbawa, na ụdị Bluetooth bụ 5.0. Waterproof ọkwa IPx5.
1. Product iwebata:
Nke a ks-020 nwere bk: 3200 mgbawa, na ụdị Bluetooth bụ 5.0. Waterproof ọkwa IPx5. Anyị bụ OEM maka ụgbọ mmiri.
2. Fithem Product oke iwebata
3. Akụkụ nke ngwaahịa Fithem
Obere, obere, mgbanaka nti na-arụ ọrụ magnet. Agaghị etinye ọnya dịka usoro isi okwu ọdịnala.
4. Fithem ngwaahịa nkọwa
Isi okwu agaghị agbanwe agbanwe n'ihi akpachapụghị anya mpịachi. O siri ike, ngwaahịa anyị ga-ekwe nkwa otu afọ.
5. Na-eji ọhụrụ Bluetooth 5.0 mbipute nke wireless nnyefe, ma na-akwado SBC, AAC na Aptx elu-edu nzuzo protocol. BUILT-IN 110MAH batrị na-agbanye ọkụ, na steeti ụgwọ zuru ezu, nwere ike inye aka elekere 13 nke egwu na-egwu ntachi obi. Iji mee ka ndị ọrụ nwee ike ịnweta oku doro anya karị, kamakwa mmụba pụrụ iche na ọrụ olu olu vibration, iji hụ na ekwentị anaghị atụ uche.
6. NT CONR AS KWES :R:: pịa tinye nwere ike na-akụ ụda pịa pịa nwere ike idebe ụda, abụọ gbakwunyere isi nwere ike ịga n'ihu egwu abụọ mwepu igodo nwere ike weghachi egwu. Enwere ike iji igodo njikwa etiti kwụsịtụ egwu ahụ. Ọnọdụ Njikwa Etiti bụ mmiri na-enweghị mmiri na ihu igwe agaghị emetụta ya, ọbụghị n'ọdịdị ma ọ bụ ịrụ ọrụ ụda ga-egosipụta mmetụta dị oke egwu, mana ọrụ nke ụda dị mma mara mma.
7. pricegwọ dịkwa ọnụ ala karịa otu ọnụahịa ahụ, isi kọmpụta arụmọrụ ọnụego dị elu ma ka mma. Ngwaahịa ahụ nwekwara ahịa na iwu na saịtị ALIBABA ， Lekwasị anya n'akụkụ akụkụ kachasị mkpa nke onye ọrụ, nke mere na ọ dị n'ọdịdị, iyi, ịkpọ oku, yana ụda dị mma enweghị ike ịhọpụta bọọdụ mkpụmkpụ doro anya, bụrụ ahịa na a nnọọ asọmpi COMMUTER ngwongwo.
Nke gara aga: Fithem ks-016 Ikuku stereo neckband bluetooth Mgbapu 5.0 sports headphone
Osote: Fithem Ks-816 Ikuku Bluetooth Bluetooth tws ekweisi ala-treble ekweisi nwere ike ahaziri logo